Komishanka Doorashada, Axsaabta iyo Qaadhaan-bixiyayaasha oo kulan ku yeeshay Addis-Ababa | Somaliland.Org
November 26, 2009	Addis-Ababa (Somaliland.Org)- Kulan ay isugu yimaadeen Qaadhaan-bixiyayaasha Caalamiga ah, Hay’adda Interpeace, Komishanka Doorashooyinka Somaliland iyo Axsaabta Siyaasadda ee dalka, isla markaana lagaga hadlayay arrimaha Somaliland, ayaa ka dhacay Magaalada Addis-Ababa ee Xarunta dalka Itoobiya.
Sida lagu sheegay Warsaxaafadeed uu Magaalada Addis-Ababa ee Xarunta Itoobiya ka soo saaray Madaxa Siyaasadda ee Xisbiga UDUB Cumar Jaamac Faarax oo ka mid ah saddex Xubnood oo shirkaa uga qayb galay Axsabta Qaranka, waxa Shirkan lagaga hadlay arrimaha Somaliland iyo habka Doorashooyinka.
Warsaxaafadeedkaas ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
“Waxa maanta shir ku wada yeeshay guddiga doorashooyinka Qaranka, Axsaabta Qaranka iyo deeq bixiyaasha magaalada Addis Ababa oo ay u jeegeen Tababar ku saabsan doorashada ay ku marti qaadkiisa fidisay Dawladda Ingiriisku.
Deeq Bixiyaashu waxay ka soo kicitimeen magaalada Nairobi iyagoo ka koobnaa Dawladaha USA, Sweden, Norway, Switzerland, UK iyo EU, dhammaantood waxa la isku yidhaahdaa Democratization Steering Committee, waxayna Somaliland ka taageeraan dhinaca doorashooyinka iyo Dimoqraadiyada.
Waxa ugu horeyn halkaa ka hadlay George Mark oo ka madax ah xafiiska EU ee Somaliya iyo Somaliland, waxuna sheegay inay si buuxda u taageerayaan doorashooyinka Somaliland. Waxay kale oo deeq-bixiyaashu hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in la siiyo Guddiga doorashooyinka Qaranka waqti ku filan oo ay kaga baaraan-degaan doorashooyinka (Reasonable time).
Waxa isna halkaa ka hadlay ninka ku xiga xafiiska siyaasada ee Qaramada midoobay u jooga Somaliya Nayrobi kuna xiga Wakiilka qaramada midoobay u jooga Somaliaya, waxuna sheegay inuu war bixin gaadhsiin doono Madaxa Qaramada midoobay Ban Ki Moon arrimaha Somaliland. Waxaanu qiray in dadka reer Somaliland yihiin kuwo awooda inay xalliyaan khilaafkooda, waxayna tusaale u yihiin Gobolka Geeska oo dhan.
Waxa isna halkaa ka hadlay Jerry McCan oo ah madaxa Hay’adda Interpeace, oo sheegay inay ku noqonayaan wada-shaqayntii ay la lahaayeen Komishanka Qaranka, halkaas oo uu sheegay inaanay ahayn wax laga xishoodo in la qirto khaladkii dhacay, kana raali gelieen xukuumada Somaliland, Madaxweynahana gaadhsiiyey raali-gelin buuxda.
Waxana iyana halkaa ka hadlay gudiga doorashooyinka qaranka oo ka codsaday beesha Caalamka in lagu taageero hawshooda, gudigu waxay kaloo sheegeen in loogu dulqaato waqtiga doorashada oo aanay hadda u hayn dhaqaale, diyaarna aanu weli ahayn serverkii, una baahan yahiin inay tababaraan shaqaalaha doorashada ka hawl geliya.
Waxa iyana halkaa ka hadlay xubnaha ka socdey Axsaabta Qaranka oo sheegay inay diyaar u yihiin inay la shaqeynayaan komishanka, waxayna sheegeen in komishanku u baahan yahay in loo daayo hawshooda ha ahaadeen axsaabta iyo beesha caalamkaba. Waxa wefdiga caawa (xalay) soo dhoweyn ugu sameeyey guriisa (Reception) Safiirka Dawladda Sweden u jooga Addis Ababa.”